IPhone 6 ibhetri ihlala ixesha elingakanani ngokomndilili?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba i-iPhone 6s ibhetri ihlala ixesha elingakanani ngokomndilili?
Ngaba i-iPhone 6s ibhetri ihlala ixesha elingakanani ngokomndilili?
Kude kube yi-iPhone 6 Plus, iApple ibikade ifumana uninzi lweeflaki malunga nomthamo omncinci webhetri abawubeka kwimodeli yabo ethandwa kakhulu ye-smartphone. Kuyavunywa, ii-iPhones zihlala zingazidingi iibhetri ezinkulu, njengolungelelwaniso lokusetyenziswa kwamandla kwe-chipset ye-Apple, imiboniso yamva nje yesizukulwane, kunye ne-iOS ephetheyo eyenzelwe izixhobo ezenziwe ekhaya kwakuthetha ukuba nangaphantsi kwe-2000 mAh ibhetri, Apple & apos; Iziphatho eziphathwayo ziyakwazi ukukufumana imini yonke.
Kule mihla, nangona kunjalo, apho abaphakathi nendawo baxhotyiswe nge-3000 + mAh iibhetri kwi-chassis ethe chu kunye nokukhanya, intlawulo yemihla ngemihla isenokungayinqumli. Ngenisa ii-iPhone 6s, kunye neemvavanyo zokuqala zobomi bebhetri- ikwazile ukubethelela amanqaku 'agqwesileyo' ngexesha lethu, isinda ngaphezulu kweeyure eziyi-8 zesikrini-ngexesha ngelixa ibonisa umfanekiso wethu wobunini ojolise ekulingiseni ukusetyenziswa kwehlabathi lokwenyani. Ngenxa yokuba i-iPhone ihlala ingenangxaki ngokutsala amandla ngelixa ulindile, iiyure ezisibhozo kunye notshintsho lwekrini-ngexesha kuthetha ukuba ubuncinci usuku kunye nesiqingatha sokusetyenziswa kobomi bokwenyani.
Ihlala njani i-iPhone 6s ibhetri?
Ubomi bebhetri(iiyure) Ephakamileyo kungcono IHTC 10 7h 10 imiz(Umyinge) I-Apple iPhone 6 5h 22 imiz(Ihlwempu) I-Samsung Galaxy S7 6h 37 imiz(Umyinge) I-Apple iPhone 6s 8h 15 imiz(Umyinge)
Ukutshaja ixesha(imizuzu) Ezantsi kungcono IHTC 10 100 I-Apple iPhone 6 147 I-Samsung Galaxy S7 88 I-Apple iPhone 6s 150
Kungenxa yoko le nto besifuna ukukubuza ukuba i-iPhone 6s ihlala ixesha elingakanani ngokomndilili ngokujonga kwakho okungavumelaniyo nesayensi. Ngaba kufuneka ihlawuliswe ekupheleni kosuku lomsebenzi oqhelekileyo, ngaba kukugqibela ngokuhlwa? Mhlawumbi kulungile de kube semini elandelayo ukuba uyibize kusasa, okanye, hee, inokukugcina kwimpelaveki yonke! Kuyavunywa, wonke umntu uneentlobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa, kodwa, ngapha koko, i-handset sele ijikeleze phantse iinyanga ezilishumi ngoku, kwaye abanini kufuneka babe nembonakalo entle ukuba ubomi bebhetri buye babangcono nohlobo lwamva nje lwe-iPhone. Khetha ukhetho olungezantsi, kwaye usixelele amava akho ngobude be-iPhone 6s ngokusetyenziswa kwesiqhelo kwemihla ngemihla.
Ngaphantsi kweeyure ezili-12 (undifumana ngosuku lomsebenzi) Malunga neeyure ezili-12 (undifumana imini yonke) Malunga neeyure ezingama-24 (oko & iiapos zenziwe ngentsasa elandelayo) Malunga neeyure ezingama-36 (undifumana de kube semini elandelayo ngosuku) Malunga neeyure ezingama-48 (undifumana ngeempelaveki) Ngaphezulu kweentsuku ezimbiniIziphumo zeVoti yokujongaNgaphantsi kweeyure ezili-12 (undifumana ngosuku lomsebenzi) 48.45% Malunga neeyure ezili-12 (undifumana imini yonke) 24.43% Malunga neeyure ezingama-24 (oko & iiapos zenziwe ngentsasa elandelayo) 14.16% Malunga neeyure ezingama-36 (undifumana de kube semini elandelayo ngosuku) 6.78% Malunga neeyure ezingama-48 (undifumana ngeempelaveki) 2.59% Ngaphezulu kweentsuku ezimbini 3.59% Iivoti 1003
Umthala s6 kuthelekiswa s6 esebenzayo
I-iphone 7 kunye nebumper yesinyithi
I-Samsung Galaxy S5 eyahlukileyo yeVerizon, iSprint kunye nenqaku leT-Mobile lokuvunywa kweCCC
Iapile kunye neapos; s i-iPhone 11 ngoku iyathengiswa kwi ... $ 0 ngaphandle kokurhweba ngaphakathi okanye ukungena ngaphakathi
I-Apple iPhone 6s vs Samsung Galaxy S6
Iapile kunye neapos; s Iifowuni ze-5S kunye ne-iPhone 5C iimeko zinemibala emininzi, umhla wokukhutshwa kukaSeptemba 20
Umahluko wentsebenzo phakathi kweemodeli zamazwe aphesheya kunye ne-US ziya kukhula ngeGlass Qaphela 20
Le mibala mine yeGlass Z Flip 3 iqinisekisiwe
Jonga le bhodi yezitshixo isebenzayo kunye nefanelekileyo ye-Bluetooth ye-iPhone 6 Plus
I-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 + ngoku iza nezindawo zokutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-Best Buy